Dugsiyada Sare Luuqadaha Dunida | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxda Luqadaha Adduunka ee Dugsiga Sare ee Minnetonka waxay ardayda u diyaarisaa inay noqdaan muwaaddiniin caalami ah oo leh heerar sare oo luqadeed iyo aqoon dhaqameed, iyadoo ardayda awood u siinaysa inay si wax ku ool ah ula xiriiraan oo ay xiriir ka yeeshaan dhaqamo kala duwan.
Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu leeyahay barnaamij luuqada aduunka oo aad ufiican ardaydeenuna waxay ku fiicnaadeen imtixaanada Luuqada Qaranka. Marka lagu daro barashada fasalka, waxaad heli doontaa ikhtiyaar ah inaad ku biirto khibradaha safarka ee caalamiga ah.
Waxaad ku bilaabi kartaa ama sii wadi kartaa barashada luqadaha adduunka ee Dugsiga Sare ee Minnetonka, iyadoo luuqadaha soo socda lagu bixiyo dhammaan fasalada:
Luqadda Dhagoolayaasha Mareykanka
Kuwa idinka mid ah ee qorsheynaya inaad dhigataan kuleejo ama jaamacad ayaa inta badan ku qancin kara ogolaanshaha kulliyadda iyo / ama shuruudaha qalin-jabinta adoo qaadanaya koorsooyinka luuqadda adduunka inta lagu jiro dugsiga sare. Dhammaan koorsooyinka luqadaha adduunka waa kuwo la doorto.
Soo dejiso dukumiintiga Waddooyinka Dunida
Sii wadida Luuqad
Haddii aad si guul leh ugu dhammaysatay Heerka 1 Faransiis, Isbaanish iyo Jarmal fasalka siddeedaad, waa inaad iska diiwaangelisaa Faransiiska 2G ama 2H, Jarmal 2, ama Isbaanishka 2G ama 2H. Kala hadal macallinkaaga hadda dhigta Luqadda Adduunka wixii talo bixin ah. Heerarka Faransiiska iyo Isbaanishka ee 2-4, waxaa jira ikhtiyaar koorso la dedejiyey, oo lagu muujiyey "H", iyo xulasho koorso heer guud ah, oo lagu muujiyey "G." Fasalada Caalamiga ah ee Baccalaureate (IB) Heerka B Heerka Heerka Sare (SL) iyo IB Sare ee Heerka Sare (HL) waxaa lagu bixiyaa Faransiis, Jarmal iyo Isbaanish heer 4 ah.
Laguuma oggolaan doono inaad ka beddesho fasallada la dedejiyey oo loo beddelo fasallo caadi ah, ama dhinaca kale, iyada oo aan macallinkaagu oggolaan. Waaxda afafka aduunka waxay leedahay tilmaamo cad kahor intaan wax isbadal ah dhicin. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la hadal macallinkaaga hadda.
Haddii aad ka soo galayso Dugsiga Sare ee Minnetonka degmo dugsi kale, daraasad caalami ah, ama barnaamij gaar ah, fadlan la tasho guddoomiyaha waaxda Luqadaha Adduunka si loo go'aamiyo meelaynta saxda ah iyo dhibcaha suurtagalka ah ee daraasad / waayo-aragnimo hore.
Faahfaahin buuxda oo koorso kasta ah ayaa laga heli karaa Satapper Log Course Catalog .
Khatimidii Labada-Luuqadood iyo Luuqadaha Badan
Quusitaanka Shiinaha iyo Isbaanishka
Kulliyadda Luqadda Adduunka
Emma De Santiago
1 2 3 … 5 > oo muujinaya 1 - 10 kamid ah 45 xubnood